Dingana 10 hananganana programa fanentanana ho an'ny mpiasa mahomby | Martech Zone
Zoma, Jolay 28, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Raha matetika ny orinasa lehibe dia manana teti-bola matavy kokoa ary afaka mividy fahitana amin'ny media sosialy, tena gaga aho fa vitsy ny orinasa mangataka ny herin'ny mpiasan'izy ireo hanampy. Niresaka tsara momba an'io izahay Amy Heiss an'ny Dell, izay namakivaky ny valiny mahavariana izay vitan'ny fikambanan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fananganana programa fanentanana sosialy ho an'ny mpiasa mahomby.
Rehefa miresaka amin'ny mpanjifa momba ny fanentanana ara-tsosialy ataon'ny mpiasa izahay dia matetika no averiko tantara hafa Mark Schaefer nozaraina momba ny orinasa iraisam-pirenena izay misy mpiasa ana hetsiny. Rehefa namoaka tamin'ny tambajotra sosialy izy ireo dia nanana tian-dry zareo sy retweet vitsivitsy. Nanontany i Mark (paraphrased) hoe: "Rehefa tsy dia liana amin'ny famakiana sy fizarana ny atiny ireo mpiasanao dia ahoana ny fahitan'ny mpanjifanao azy?". Fanontaniana mivaingana… ny fanentanana ara-tsosialy ataon'ny mpiasa dia tsy ny fizarana fotsiny, fa ny fikarakarana koa.
Ireo fikambanana hafa noresahiko dia misalasala mangataka fanampiana amin'ny mpiasan'izy ireo, ary misy aza mamolavola politika manohitra izany. Mipoka tanteraka ny saiko fa ny orinasa iray dia hametra ny talenta lafo vidy sy lafo indrindra ary hanakana azy ireo tsy hizara ny fahalalany, ny fitiavany, na ny hevitr'izy ireo mihitsy aza. Mazava ho azy, misy ny maningana miaraka amin'ny indostria voafehy be, fa asehoy ahy ny indostria voafehy ary mbola hahita programa mahomby izay miasa ao anatin'ny sakana ianao.
Na izany aza, ny orinasa hafa dia misy mpiasa tsy mahatsapa ho adidy hanampy amin'ny fampiroboroboana ny orinasa. Amin'ireny tranga ireny dia mila mijery lalina kokoa ny kolotsaina an'io orinasa io aho sy ny karazana mpiasa karamako. Tsy azoko an-tsaina ny fanakaramana mpiasa tsy te-hampiroborobo ny asany. Ary tsy azoko an-tsaina hoe mpiasa aho ary tsy nanambony tena mba hampiroborobo ny ezaky ny ekipako.
mpiasa ankehitriny dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny ezaky ny marketing amin'ny atiny. Miaraka amin'ny fihenan'ny fidiran'ny voajanahary amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny fitomboan'ny habetsaky ny atiny, ny hazakazaka hisarihana ny sain'ny olona dia mifaninana kokoa noho ny hatramin'izay ary ny mpiasa dia lasa fananana fototra ho ambasadaoron'ny marika media sosialy azo itokisana. Raha ny marina, ny orinasa iray misy mpiasa 20 manana olona maherin'ny 200 ao amin'ny tambajotran'izy ireo dia afaka mamokatra efatra heny ny fanentanana amin'ny media sosialy.
Inona no atao hoe Advocacy sociale an'ny mpiasa?
Fanentanana ny mpiasa dia fampiroboroboana ny fikambanana iray amin'ny tambajotran-tseraseran'izy ireo manokana.
Asao ny mpiasao hiditra an-tsitrapo amin'ny programa vaovao momba ny fiarovana sosialy ho an'ny mpiasa vaovao.
Mamorona haino aman-jery sosialy torolalana ary manabe ny mpiasa amin'ny fomba fanao tsara indrindra.
Fenoy ny onboarding dingana ho an'ny fitaovana fanentanana ny mpiasa hampiasanao.
Fantaro ny tanjon'ny orinasao ary pifidianana ho an'ny programa.
Mamorona fanentanana ho an'ny mpiasa ekipa mitantana ny ezaka ataon'ny orinasa ary manendry mpandrindra programa.
Alefaso a programa mpanamory miaraka amina vondrona mpiasa kely alohan'ny hanitarana izany amin'ny fikambanana iray manontolo.
Manafay ary mamolavola karazana vaovao sy mifandraika afa-po ho an'ny mpiasa mba hizara amin'ny mpanaraka azy.
Fantaro raha tokony hisy ny atiny sy ny fandefasan-kafatra nankatoavina mialoha avy amin'ny mpandrindra ny programa.
Araho ny zava-bitan'ny programa ary valim-pitia mpiasa manana fanentanana ho fanohanana azy ireo.
ohatra ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny ezaka ataon'ny mpiaro anao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny KPI manokana.
Mba hampisehoana ny maha-zava-dehibe an'ity paikady ity sy ny fiantraikany, ny olona ao SocialReacher namolavola ity infographic ity, Ny herin'ny mpisolovava amin'ny media sosialy, izay mampiseho an'izany, ny antony ahombiazany, ny fomba fiasany, ary ny vokany ho an'ireo fikambanana izay manaparitaka fomba mahomby ireo programa fanentanana amin'ny media sosialy ho an'ny mpiasa. Aza hadino ny mandehandeha hijerena ilay video manazava tsara eo SocialReacher!
Momba ny SocialReacher
SocialReacher dia fitaovana mpiaro ny haino aman-jery sosialy izay manome hery ny mpiasan'ny orinasanao sy ny mpiara-miasa aminy ho mpisolo vava ara-tsosialy ho an'ny marikao. Ampitomboy ny fisian'ny media sosialy an'ny orinasan'ny orinasanao, ampitomboy ny tanjony ary atsangano ny fahamendrehana amin'ny alàlan'ny fampandraisana anjara ny ekipanao hizara sy hampiroborobo ny atiny orinasa. Ny mpiasanao no mpanohana ny marika tsara indrindra azonao atao. Raha mino izy ireo dia hanaraka izany ny ambiny.
Tags: fisoloana vavafiarovana ny mpiasavalisoa avy amin'ny mpiasafanentanana ara-tsosialy ho an'ny mpiasaprograma momba ny fiarovana ny haino aman-jery sosialy ho an'ny mpiasaprograma valisoa sosialy ho an'ny mpiasaahoana nony fomba fananganana programa fisolo vavafanentanana amin'ny media sosialysocialreacherinona nyinona ny fanentanana ara-tsosialy ho an'ny mpiasa